Naas Nuujinta Xilliga Soonka Iyo Talooyinka Dhakhtarka - Daryeel Magazine
Naas Nuujinta Xilliga Soonka Iyo Talooyinka Dhakhtarka
Waxaa jira hooyooyin badan oo carruur jaqsiiya naaska, laakiin jecel in ay soomaan bisha barakaysan ee Ramadaan, kuwaas oo warwar badan ka qaba in soonku raad ku yeesha caafimaadka hooyada ama caafimaadka ilmaha ay jaqsiinayso.
Qormadan waxa aynu ku eegaynaa talooyin caafimaad oo ay dhakhaatiirta takhasuska ahi u diyaariyeen hooyada ilmuhu jaqo ee doonaysa in ay soonto, kana warwarsan caafimaadka nafteeda iyo ilmaha, waxa aana talooyinkaas ka mid ah:
– Hooyada Ilmuhu jaqo ee soomaysaa waa in cabbitaan badan cabto, laga bilaabo afurka illaa afxidhka bisha Ramadaan. Waxa anay dhakhaatiirtu ku taliyeen in cabbitaanka biyaha iyo sharaabada isugu jira ee ay hooyadani cabbaysaa aanu ka yaraan 8 illaa 12 koob.
– Xilliga suxuurta waa in ay hooyadani xoogga saartaa biyo cabbista.
– Hooyadai lmaha jaqsiisa ee soomaysaa waa in ay ku afurto cunto ay ku badan yihiin Kalooriska oo looga jeedo xaddiga tamarta uu jidhku heerkulkiisa uga baahan yahay ah ee ku jirta cuntada.
– Hooyadu waa in ay badsato khudradda noocyadeeda, xilliga afurka iyo suxuurta labadaba.
– Hooyadai lmaha jaqsiisa ee soomaysaa waa in ay doorata cuntooyinka ay ka mid yihiin Caanaha, Timirta iyo khudradda ingagan.
– Hooyada ilmaha jaqsiisa ee soomani waa in ay shaqooyinka u baahan muruqa iyo dhaqdhaqaaqa jidheed u dhigato habeennimadii, oo aanay samayn inta ay sooman tahay.
– Waa in ay ku dadaasho qabowga jidhkeeda, xilliga kulaylka badani jirana ay waqti ka mid ah maalinta nasato.
– Haddii hooyada naaska nuujisa ee soomani ay xilliga ay afxidhantay dareento ingag badan, dawakhaad, ama daal jidheed ama miyir beelba waxaa lagula talinayaa in ay soonka jebiso, sida ugu dhaqsaha badanna dhakhtar ula xidhiidho.
Sababaha Keena Dhareerka Xilliga Hurdada Dhibaatooyinka Laga Dhaxlo Dhafarka Badan Iyo Talada Dhakhtarka CABITAANKA BAYTARAAFKA: Cudurrada Uu Dawada Ka Yahay Iyo Ahmiyadiisa Xilliga Ramadaanka 6 Siyaabood Oo Aad Iskaga Ilaalin Karto Daalka Iyo Caajiska Xilliga Shaqada